गर्भवती हुँदा के खाएमा छोरा जन्मन्छ ? र बच्चा गोरो हुन्छ…? जानी राखौ - Daily Lokmandu
Homeस्वास्थ्य/जिबनशैलीगर्भवती हुँदा के खाएमा छोरा जन्मन्छ ? र बच्चा गोरो हुन्छ…? जानी राखौ
August 29, 2018 स्वास्थ्य/जिबनशैली Comments Off on गर्भवती हुँदा के खाएमा छोरा जन्मन्छ ? र बच्चा गोरो हुन्छ…? जानी राखौ
यसको लागि उनिहरुले ७४० गर्भवति महिलाहरु लाई सहव्हागि गराएका थिए। सहभाइहरु मध्ये जसले धेरै क्यालोरि युक्त खाना वा केरा खाएका थिए उनिहरुको छोरा भएको थियो भने थोरै क्यालोरियुक्त खाना खने र थोरै केरा खानेको छोरि भएको थियो।
सम्भावना बढि हुने बहेकोले नै गर्दा हुन सक्छ अनतदेखि यो भनाइ भनिदै आएको छ। त्यस्तै यदि महिला गर्भवति हुँदा छतिमा बढि पोल्छ भने रौं धेरै भएको बच्चा जन्मने कुरा पनि बैज्ञानिक रुपमा सिद्ध भैसकेको छ।
सम्भावना बढि हुने बहेकोले नै गर्दा हुन सक्छ अनतदेखि यो भनाइ भनिदै आएको छ। त्यस्तै यदि महिला गर्भवति हुँदा छतिमा बढि पोल्छ भने रौं धेरै भएको बच्चा जन्मने कुरा पनि बैज्ञानिक रुपमा सिद्ध भैसकेको छ
खुल्यो यस्तो डरलाग्दो तथ्य, नेपालको ढाडमा टेकेर चीनको टाउकोमा हान्ने दाउमा भारतले घुसायो सेना